अराजक शब्दहरु: 04/01/21
राष्ट्र पतनका कारण-युवराज गौतम
गंगोत्रीबाट गंगा र मानसरोवरबाट व्रह्मपुत्र नदी निःसृत भएझै ज्ञानगंगाको उद्गमभूमि मानिन्छ, हिमवत्खण्ड ।
बितेका साठी–सत्तरी वर्षको लेखाजोखा गर्दा नेपालमा लाखौँ जनता ‘शिक्षित’ भए पनि तीमध्ये ‘विद्वान्–विदुषी’ कति छन्, त्यो अनुसन्धानको विषय हो । उदाहरणका लागि, प्रसिद्ध विद्वान् नयराज पन्त स्कुल–कलेज जानुभएन । तर उहाँको ज्ञानबाट राष्ट्र लाभान्वित भयो । पन्त भन्नुहुन्थ्यो– ‘त्रिखण्डी शिक्षा काम लाग्दैन ।’
सुन्दा अप्रिय लाग्ला, आज नेपालको डेमोक्रेसी नेपाली जनताको अनुहारसँग ठ्याक्कै मिल्छ । मासु, रक्सी, स्वार्थ र नगदमा साटिने गरेको ‘जनअधिकार’ जसरी प्रयोग हुन्छ, डेमोक्रेसी त्यस्तै हुँदोरहेछ । हामी यसमा रमाइरहेका छौँ ।
थोरै खर्च कमाउँछन् र साँझमा टुइँक्क मातेर ती डेमोक्रेसी पलाक्छन् । पेटमा रक्सी ‘इन’ भएपछि उनीहरूको अंग्रेजी ‘आउट’ हुन्छ ।
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 10:33:00 PM No comments:
खान्की, जीवाणु र शरीर-डा. सुभाष पोखरेल
परिमार्जन विज्ञानको आधार हो। आजको वस्तु तथा सेवालाई भोलि अझ असल बनाउनु विज्ञानको मर्म हो, अनुसन्धानको धर्म हो। तत्कालका आविष्कारले पुष्टि गरेका तथ्यको जगमा विगतका धारणा परिवर्तन गर्नु वैज्ञानिकको कर्तव्य हो। मानव जीवनलाई भोलिका दिनमा अझ असल बनाउन अनुसन्धान गरिन्छ।
आमाको गर्भ अति नै स्वच्छ हुन्छ र त्यहाँ कुनै पनि जीवाणु प्रवेश संभव हुँदैन। तर ‘स्टेराइल’ आमामा पेटबाट निस्कने बित्तिकै बच्चा सुक्ष्म जीवाणुको समुन्द्रमा प्रवेश गर्छ।
मानव शरीरमा पाइने सुक्ष्म कीटाणुलाई सामान्य भाषामा माइक्रोबायोम तथा माइक्रोबायोटा भनिन्छ।
बाह्य संक्रमणबाट जोगाउन मुख्य भूमिका खेल्ने भएकाले छालालाई शरीरको ‘फस्ट लाइन अफ् डिफेन्स’ भनिन्छ। छालामार्फत् विभिन्न किसिमका खराब भाइरस ब्याक्टेरिया शरीरमा पस्ने भएकाले उक्त प्रवेश मार्ग रोक्न ‘स्किन माइक्रोबायोम’ ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।
मानिसको छालामा झण्डै एक हजार प्रजातिका गुणी जीवाणु पाइन्छन्।
सामान्यतः गुन्द्रुक, सिन्की जस्ता ‘फर्मन्टेसन’ विधिमार्फत् तयार गरिएको खान्कीले गुणी ब्याक्टेरिया बढाउने गरेको पाइन्छ। समष्टिगतरूपमा शाकाहारी खान्कीले असल ‘गट ब्याक्टेरिया’ को संख्या बढाउने भएकाले जंक फुडको बदला साद्गीपूर्ण भोजनमा जोड दिन आवश्यक छ।
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 9:58:00 PM No comments:
गाली र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता-डा. सुरेश आचार्य
जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही भाषाशैलीमा प्रस्तुत हुनु वा हुन पाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो वा नागरिक, समाज र राष्ट्रप्रति जिम्मेवारपूर्ण ढंगमा बोल्न पाउनुचाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो ?
भोल्तेयरको एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ– म तिम्रो विचारसँग असहमत छु तर तिम्रो विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रताका पक्षमा सधैंँ लडिरहने छु।
अग्रेजी भाषामा ‘फ्रिडम अफ स्पिच’ र ‘फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन’को फरक अर्थ छ। व्यक्तिको बोल्न पाउने स्वतन्त्रतालाई ‘फ्रिडम अफ स्पिच’ भनेर बुझिन्छ। यो बोल्न पाउने स्वतन्त्रता व्यक्तिले आफूलाई लागेको कुरा निर्वाध, कुनै डर, त्रास वा कानुनी बन्देजविना बोल्न पाउने अधिकारको अर्थमा बुझिन्छ। ‘फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन’चाहिँ कुनै माध्यम प्रयोग गरेर आफ्ना कुरा अभिव्यक्त गर्न पाउने स्वतन्त्रता हो।
संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्रमा रहेको धारा १९ (आर्टिकल नाइन्टिन) को परिभाषाले हरेक व्यक्तिलाई कसैको हस्तक्षेपविना आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने एवं कुनै माध्यमबाट कुनै सीमाको पर्वाह नगरी विचार अभिव्यक्त गर्न तथा सूचना माग्न, पाउन र सम्प्रेषण गर्न पाउने अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ। राष्ट्र संघको यो परिभाषा मूलतः सत्रौँ शताव्दीका ब्रिटिस कवि जोन मिल्टनको तर्कमा आधारित छ। उनले बोल्न पाएर मात्र हँुदैन, सूचना माग्न र पाउन पर्छ र त्यसरी प्राप्त सूचना एकअर्कामा कुनै माध्यम प्रयोग गरेर वा नगरेर सम्प्रेषण वा प्रवाह गर्न पाउनुपर्छ भनेका छन्। यो सन्दर्भलाई सूचनाको हकमा लगेर अहिले व्याख्या गरिँदै आएको छ।
प्रसिद्ध भनाइ छ– तिम्रो स्वतन्त्रताको सीमा त्यहाँ अन्त्य हुन्छ, जतिबेला तिम्रो हातले अर्काको नाकमा छुन्छ। यो भनाइले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमारहित हँुदैन भन्ने मान्यताको विकास गरेको छ। अर्थात्, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष स्वतन्त्रता होइन, कानुनी आधारमा यसको सीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ। खासगरी अर्काको अधिकार र संरक्षणमा बाधा नपुग्ने गरी स्वतन्त्रताको सीमा निर्धारण गरिन्छ। दुनियाँमा गाली, बेइज्जती, मानहानि, अश्लीलता आदि विषयका कानुन पनि यही सन्दर्भमा तयार भएका हुन्। एकले अर्कालाई कुनै कारण भएर वा नभई पनि गरिने गालीगलौज अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानिँदैन। आफ्नो प्रशंसा गर्ने छूट त्यसबेलासम्म रहन्छ, जतिबेला अर्काले गालीको अनुभूति गर्दैन।
व्यक्तिका सन्दर्भमा पनि सार्वजनिक व्यक्ति र सामान्य व्यक्तिका बीच भेद गरेर सीमा निर्धारण गरिएका हुन्छन्। सार्वजनिक सरोकार नहुने वा सामाजिक असर वा प्रभाव नपर्ने विषयमा कसले के भन्छ वा गर्छ भन्ने कुरालाई गौण मान्ने पनि गरिएको छ। घरभित्र अभिव्यक्त हुने कतिपय विचार वा क्रिया समाजमा त्यही ढंगमा अभिव्यक्त गर्न सकिँदैन वा मिल्दैन। घरभित्र हुने झगडा सार्वजनिक जीवन वा अदालतमा प्रवेश नगरेसम्म अपराध पनि नहुन सक्छ। आन्तरिक असहमतिहरू आन्तरिकरूपमा नै समाधान खोज्ने गरिन्छ।
कुम जोडुन्जेल र अंगालो हालुन्जेल सुगन्धित ठानिएका सम्बन्ध स्वार्थ बाँझिनासाथ दुर्गन्धित हुनु आश्चर्य होइन।
लोकतन्त्र शासनको एउटा विधि मात्रै हो, शासनको एउटा स्वरूप हो, पद्धति हो। यस अर्थमा लोकतन्त्र राजनीतिक साधन मात्र हो। नागरिकले गर्ने परिवर्तनको अनुभूति साध्यको लक्ष्य हो। राजनीतिक दलका नेताहरूले दिने नीति र कार्यक्रम साध्य हुन्। यस्तो नीति राजनेताहरूले खोज्ने हो। अझ लोकतन्त्रमा राजनीति संस्कार सबैभन्दा बढी अपेक्षा गरिने विषय हो। लोकतन्त्र लिखत कानुन र संविधानका आधारमा मात्र चल्दैन। यसका केही संस्कारजन्य चरित्र हुन्छन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रका गहनाका रूपमा लिइरहँदा यसका सीमा निर्धारण गर्ने काम पनि लोकतन्त्रले नै गर्छ जसले लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामा अवरोधको कल्पना गर्दैन। ती मूल्य÷मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न सहजीकरणको काम गर्छ।
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 9:42:00 PM No comments:
सेनाले नपढेको किताब-युवराज गौतम
अनिर्णय र विलम्बले समस्या जन्माउँछ भन्ने विद्वान्हरूको मत छ ।
अमेरिका स्वतन्त्र हुनुभन्दा ८ वर्षपहिले पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणमा गोर्खाली सेनाबाट अतुल्य सहयोग पाएको हाम्रो इतिहास छ । महाभारत, शुक्राचार्य नीतिलगायतका प्राचीन ग्रन्थहरूको मद्दतले सेनाले नीति बनायो । तेह्रवटा ब्रिटिस उपनिवेश मिलेर अमेरिकालाई ब्रिटेनबाट स्वतन्त्र गराउँदा जर्ज वासिङ्टनलाई प्रधानसेनापति बनाइयो । सन् १७७५ को जुन १४ तारिखमा ब्रिटेनविरुद्ध गठन भएको थियो, त्यो सेना ।
सेनाले सरकारको आदेश लुरुक्क र खुरुक्क मान्नुपर्छ भन्ने आजको ‘डेमोक्रेसी’ भन्दा फरक थियो प्राचीन सेनाको सोच । राष्ट्रघात गरेको ठहर भएमा आफ्नै बाबुको पनि वध गर्नुपर्छ भन्ने तालिममा हुर्किएका उनीहरूले सत्य–असत्य छुट्याएर असत्यको दमन गरे ।
सेनाले गोलीवारुद मात्र बुझेर पुग्दैन, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, कूटनीति र समाजका विभिन्न आयामको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सेनाको टोली लिएर सत्चितशमशेर राणा खम्पा विद्रोह दमन गर्न मुस्ताङ पुगेका थिए । उनी तन्नेरी अधिकृत थिए । साँझपख एउटा युवकले युवतीलाई घिस्याएको देखेछन् । केटी ‘जान्न–जान्न’ भन्ने तर केटाले तानिरहेका थिए । राणाले ‘युवतीमाथि अत्याचार भएको’ ठानेर केटालाई नाथ्री फुट्ने गरी दुई÷चार मुक्का हानेपछि गाउँलेहरूले सम्झाएछन्– ‘यसरी केटाले केटी घिस्याउनु यहाँको संस्कृति हो हजुर, नकुट्नु होला ।’ नेपालका कतिपय समुदायमा आमाबाबुको आँखा छलेर त्यसरी केटी भगाउने चलन छँदैछ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो तर समाजका विभिन्न पक्षको अध्ययन गर्दा विभिन्न जातजातिका सम्वेदनशील परम्परा, धर्मसंस्कृति एवं मूल्यमान्यताको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
घटना भइसकेपछि थाहा पाउनेलाई ‘दोयम बुद्धिको नागरिक’ मानिन्छ ।
राजनीतिक दलहरू र सरकार त आउँछन्, जान्छन् । स्थायी भनेको त राष्ट्र नै हो ।